2.1.2019, Full time , Distribution / Logistic
•	Hand Phone Software ပြုပြင်ရန်။
•	KTV သီချင်းဖြတ်ပေးရန်။
•	ပစ္စည်းအသစ်ဝင်လာလျှင် Software ပိုင်းစမ်းပေးရန်။
•	Phone Software Certificate ရှိရမည်။
•	Hand Phone Software ပိုင်းကိုကျွမ်းကျင်စွာ ပြုပြင်တက်ရမည်။
•	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁) နှစ်ရှိရမည်။
•	အသင်းအဖွဲ့ နှင့်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ရံဖန်ရံခါ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ OT ဆင်းနိုင်ရမည်။
Work location 150, Shwe Yinnmar St., Ward (13),
Job Function: Software Technician
• မော်တော်ယာဉ်နှင့် ပတ်သက်သောကိစ္စများ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။ • လုံခြုံရေးအဖွဲ့အား စစ်ဆေးပေးခြင်း။ • ပြည်တွင်း / ပြည်ပ ကား၊လေယာဉ်လက်မှတ်ဝယ်ယူခြင်း၊ ဗီဇာလျှောက်ထားခြင်း။ • Company မှတ်ပုံတင် သက်တ� ...
•	Consult with product development personnel on product specifications such as design, color, and packaging. Compile lists describing product or service offerings. Use sales forecasting and strategic planning to ensure the sale and profitability of products, lines, or services, analyzing business developments and monitoring market trends. •	Confer with legal staff to resolve problems, such as copyright infringement and royalty sharing with outside producers and distributors. Coordinate and participate in promotional activities and trade ...
•	Coordinate within the company and Group and prepare Budget •	Ensure generation of reliable financial statements of the company, including the Balance Sheet, Income Statement and Cash Flow Statement, among others •	Overall Manage on Company's internal cash flow with daily Income and Expenditure. •	Review each individual company’s accounting books and records to ensure they have been accurately prepared in compliance to accounting standards and group company policy •	Monitor and analyze Financial Performance through monthly fina ...
•	Customer development •	Customer relationship maintain •	All sales activities •	Project documentation •	Support of project management:including sourcing of local support •	Prepare the minutes of the meeting: Meeting scheduling, sales meeting report...etc.
•	အရောင်းစီမံချက်အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း။ •	ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။ သတင်းအချက်အလက်များ စုဆောင်းတင်ပြခြင်း။ •	New Outlet များရှာဖွေခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း။ •	မော်တော်ယာဉ်အား ထိန်းသိမ်းစော� ...
•	Management of the entire recruiting staff: sourcing resumes/candidates, conducting phone and in person interviews, scheduling, tracking and reporting on candidate and interview data. •	Negotiates salary and administrative components involved in full staff recruiting. •	Expert in utilizing social media sources, resume databases , and job boards to source and pursue qualified candidates. •	Responsible for conducting the staff inducting the staff induction plan to new staff and retainsaqualified and diverse candidates pool at all ti ...
• စကားအပြောအဆိုသွက်လက်ရမည်။ • ဈေးရောင်းခြင်းကိုဝါသနာပါရမည်။ • အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ရမည်။ • Product Knowledge Training ပေးမည်။ • နယ်မှလာသူများ အဆောင်စီစဉ်ပေးမည်။ • တိုးတက်ချင်စိတ်ရှိသူများအတွက် အလုပ်အ� ...
Negotiate and work together with clients, other departments, site teams and subcontractors based on requirements. Prepare structural and architectural drawings that detail plans and specifications Coordinate the collection of data and incorporate this information into drawings Filing hard copy of the drawings Issue the hard copy and soft copy drawing to site as required. Update drawing and document register weekly Ensuring project file contains latest design information, internal & external Checking the documents, filing and discre ...
•	Make entry for all companies daily MIT accounting software transaction receipt/ payments transactions by basic from cashier cash book •	Checked for all account code by income & expenditure (MIT Accounting Software) •	Daily checked for bank transaction by account code (MIT Accounting Software) •	Daily entry by MIT Accounting software by checked of general ledger balance •	If HR leader want to seem all transaction, make its assp •	Overview report for General Overhead Expense •	Overview report for Daily Income receipts � ...
•	ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး အသင်းအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	နယ်သွားလာန်ိုင်ရမည်။
•	Transport Department အားကြီးကြပ်ညွှန်ကြားမှုပေးခြင်း •	Security Team အားစစ်ဆေးခြင်း •	Company Registration ကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း •	လေယာဉ်လက်မှတ်၊ ကားလက်မှတ်ဝယ်ယူခြင်း၊ ဗီဇာလျှောက်ထားပေးခြင်း •	Office Stationary, Office use များစီစစ်ဝယ်ယူပေးခြင်း ...
•	မန္တလေးမြို့နယ်အတွင်း နေထိုင်သူဦးစားပေးမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့ဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	ရိုးသားကြိုးစား၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွှက်ရာတွင် တိကျသေသပ်စွာ ဆောင်ရွှက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	နယ်သို့ သွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ပြီး အသင်းအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းေ ...
142 Days, Full time , Distribution / Logistic
•	Sale Target ပြည့်မီအောင်ဖြန့်ဖြူးမှုဆိုင်ရာ စီမံချက်ရေးဆွဲရန်။ •	Marketing Segment အတွင်းရှိ Outletဆိုင်များမှ Sale Order များအားအတိအကျကောက်ခံရန်။ •	ကုန်ပစ္စည်းများပေါ်လွင်အောင် ခင်းကျင်းပြသရန်။ •	ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များနှင့် Prom ...
•	အရောင်းလမ်းကြောင်းအတွက် စီစဉ်ပေးခြင်း။ •	လုပ်ဆောင်ချက်များကို နေ့စဉ်၊အပတ်စဉ်၊ လစဉ် အစီရင်ခံစာများပြုလုပ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာမန်နေဂျာသို့တင်ပြရန်။ (CRM)
168 Days, Full time , Distribution / Logistic
•	CCTV, PABX, အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းနှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ ပြုပြင်ရန်။ •	ပြင်မရပစ္စည်းများ၏ error အပေါ်အကြံပေး ဆွေးနွေးတင်ပြရန်။ •	ရံဖန်ရံခါ CCTV တပ်ဆင်ရာတွင် ကူညီပေးရန်။
•	Monthly Transport Department Vehicles Maintenance & Repair Expenses report to Chief Auditor •	Site Vouchers များစစ်ဆေးပေးရန်။ •	Admin Department မှ Fixed Asset များစစ်ပေးရန်။ •	Warehouse •	Stock များစစ်ရန်။ (Ygn, MDY, NPT)
•	Hand Phone Software ပြုပြင်ရန်။ •	KTV သီချင်းဖြတ်ပေးရန်။ •	ပစ္စည်းအသစ်ဝင်လာလျှင် Software ပိုင်းစမ်းပေးရန်။
•	Hand Phone Hardware အပျက်ပြုပြင်ရန်။ •	ပြင်မရပစ္စည်းများ၏ error အပေါ်အကြံပေး ဆွေးနွေးတင်ပြရန်။ •	ပစ္စည်းအသစ်ဝင်လာလျှင် Hardware ပိုင်းစမ်းပေးရန်။
•	နယ်ရုံးခွဲတွင် သွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့ဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
187 Days, Full time , Distribution / Logistic
•	စကားအပြောအဆိုသွက်လက်ရမည်။ •	ဈေးရောင်းခြင်းကိုဝါသနာပါရမည်။ •	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ရမည်။ •	Product Knowledge Training ပေးမည်။ •	နယ်မှလာသူများ အဆောင်စီစဉ်ပေးမည်။ ဖယ်ရီပေးသည်။ •	တိုးတက်ချင်စိတ်ရှိသူများအတွက် � ...
ဂိုဒေါင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်။ •	မန္တလေးမြို့နယ်အတွင်း နေထိုင်သူဦးစားပေးမည်။
•	There should be close liaison between credit controller and marketing/sales department so that credit issues are resolved smoothly. •	Checking customer's credit situation and deciding whether or not to offer the credit •	Setting up the terms and conditions of the receivable balances •	Dealing with internal queries about payments, ensuring customers pay on time and negotiating re-payment plans. •	Dealing with Banker about hire purchase, to ensure that HP run smoothly and monitoring customers payment on time to the bank and make s ...
•	အသင်းအဖွဲ့နှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ •	ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး အရက်သေစာအသောက်အစားကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ •	မန္တလေးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	နယ်မှ လာသူအဆောင်စီစဉ်ပေးမည်။
•	Hand Phone Hardware ပိုင်းကျွမ်းကျင်စွာဆောင်ရွှက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွှက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	Aircon များစစ်ဆေးပြုပြင်ပေးရန်။ •	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
357 Days, Full time , Distribution / Logistic
•	ငွေအ၀င်/ အထွက်စာရင်းများ ပြုစုရန်။ •	အရောင်း ဘောင်ချာများဖွင့်ပေးရန်။ •	အပတ်စဉ် နှင့် လစဉ် အရောင်းစာရင်းများ စာရင်းချုပ်၍ ရုံးချုပ်သို့တင်ပြရန်။
•	အသင်းအဖွဲ့ဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Senior IT Trainee
•	A + Networking ပိုင်းကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Server ပိုင်းနားလည်ကျွမ်းကျင်သူရှိရမည်။
Software Technician Engineering & Technical jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon A-G-T Company Limited Engineering & Technical jobs Engineering & Technical jobs Software Technician Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Work in Yangon (Rangoon)(5140)
Work in Yangon Region(950)
Work in Mandalay Region(490)
I.E.M Co., Ltd.(36)